စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် CIIE ပြပွဲ အကြိုပြင်ဆင်မှုစတင် - Xinhua News Agency
ရှန်ဟိုင်း၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ် နိုင်ငံတကာ သွင်းကုန်ပြပွဲ (CIIE) ပြပွဲအတွင်း၏ အွန်လိုင်းပြပွဲ ပြင်ဆင်မှုကာလကို အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်၌ စတင်လိုက်ပြီး နိုင်ငံအသီးသီးမှ ၎င်းတို့၏ ယကျေးမှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် ကုန်စည်များအား ခင်းကျင်းပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ ပြပွဲအား နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်မှ ၁၀ ရက်အထိ ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ပြပွဲ၏ အဓိကအရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် အွန်လိုင်းပြပွဲတွင် ယခုနှစ်၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာအသစ်အဖြစ် ဒီဂျစ်တယ်ပြပွဲခန်းမများ တည်ဆောက်ရန် 3D ပုံစံနှင့် အွန်လိုင်းအင်ဂျင်များ (virtual engines) များ အပါအဝင် နည်းပညာများ ထည့်သွင်းထားကြောင်း CIIE ဗျူရို လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Liu Fuxue ကပြောကြားခဲ့သည်။
ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ အီတလီနိုင်ငံ ကောင်စစ်ဝန် Michele Cecchi က ယခုနှစ်ပြပွဲသို့ အီတလီ ကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ခန့် တက်ရောက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း၊ အွန်လိုင်းပြပွဲမှတစ်ဆင့် အီတလီနိုင်ငံ၏ အလှတရားများအား တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ကြည့်ရှုသူများအား မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
CIIE သည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပြည်သူအချင်းချင်း ကူးလူးဖလှယ်မှုများအတွက် အခွင့်အလမ်းအသစ်များ ပံ့ပိုးပေးရန် အကျိုးရှိ၍ ကောင်းမွန်သော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ထို့ပြင် CIIE သည် သွင်းကုန်ပြပွဲအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ပထမဆုံး ကမ္ဘာအဆင့်မီပြပွဲဖြစ်ပြီး ယခင်ကျင်းပခဲ့ပြီးသော ပြပွဲသုံးခုမှ အသီးအပွင့်ရလဒ်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
SHANGHAI, Oct. 13 (Xinhua) — The 4th China International Import Expo (CIIE) on Wednesday launched the trial period of its online country exhibition, which will see different nations exhibit their cultures, characteristic industries and goods.
CIIE Bureau Deputy Director Liu Fuxue said the country exhibition, as an important part of the expo, has adopted technologies including 3D modeling and virtual engines to build digital exhibition halls —anew feature at this year’s expo.
Michele Cecchi, consul general of Italy in Shanghai, said that about 100 Italian companies are set to attend this year’s expo. Through the online country exhibition,areal journey through the beauties of Italy will be on offer to both Chinese and overseas audiences.